Ampiasao ny zava-poana amin'ny efitra fandroana amin'ny kabary samihafa, Hodio ny efitra fandroana fandroana!
Ataovy miavaka lavaka fandroana from China manufacturer in different styles and materials , velomy indray ny efitrano fandroana?!!! Araka ny fantatsika rehetra, Kabinetra fitaratra efitra fandroana fanaka dia fanaka manan-danja amin'ny fandroana manontolo. Ny fantsom-pahazomana fitaratra tsara dia hahatonga ny efitra fandroana iray ho lasa lamaody sy tsara tarehy. Manampia glam fanampiny avy hatrany ho an'ny efitra fandroanao miaraka amin'ny kabinetra rindrina ao amin'ny efitrano fandroana vaovao misy lakana sy fitaratra, izay avy amin'ny endrika sy fomba isan-karazany, tonga lafatra hanampiana fahatsapana ho ao anatiny!
Isan'andro, manamboatra ny nifintsika sy manasa ny tarehy ao amin'ny kabinetra fitaratra izahay. Ary noho izany, tsy maintsy misy kabary fitaratra tsara sy azo ampiharina ao an-trano. Ary mbola betsaka ny zavatra tokony handinika rehefa mividy kabinetra trano fandroana. dia, ny fomba fisafidianana ireo fandroana mety fandroana mety??
Diniho ireto teboka manaraka ireto rehefa miantsena ho an'olona tsy misy tasy:
(1) What size of bathroom vanity with sink do you need? Fantaro ny refin'ny efitrano fandroana anao mba hanampy anao hifidy kabinetra tsy misy fandroana sy fanaka fandroana mety hitranga.
(2)Inona no vokatra farany tadiavinao hotratrarina?
(3)Avy aiza ny ranonao? Ny rano mandro amin'ny efitra fandroana dia tokony ho akaiky ny loharanon-drano, noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra izany alohan'ny hanaovana ny safidinao.
(4)Inona ny teti-bolanao? Ny fahafantaranao ny teti-bolanao dia hanampy anao hamantatra raha afaka misafidy ny fanaka fidiovana namboarina na efitrano efa namboarina ianao.
I Frank dia mpamatsy fiarakodia amam-baravarankely azo avy amin'ny trano fandroana any Sina. Hataontsika foana ny hevitra tany am-boalohany, ary nifantoka tamin'ny kabine fandroana avo lenta amin'ny 13 taona. Hatreto dia maro ny fananganana FRANK 500 fivarotana any an-trano sy any ivelany. Mitadiava sy zatra ny trano fandroana tonga lafatra izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, karazan-java-damba isan-karazany amin'ny fomba samy hafa, ao anatin'izany ny fisian'ireo trano fandroana Amerikanina ho zava-poana、Zavaboary fandroana antitra、Zavaboary fandroana maoderina amin'ny famolavolana maoderina,etc., dia miandry anao ao Frank !!! Tongasoa eto amin'ny hanontany sy ny filaminana!!!